चीन जान लागेका अोलीलार्इ डा. भट्टरार्इको सुझाबः भारतसँगको मात्र होइन चीनसँगको पनि सन्धी पुनरावलोकन होस – Halkaro
काठमाडौँ । असार ५ गते चीनको राजकीय भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शृमा अोलीलार्इ पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्इले १० बुँदे सुझाब दिएका छन्।
उनले भारतसँग भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीसँगै चीनसँग भएको १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीसमेत पुनरावलोकन गर्न अावश्यक रहेको सुझाब दिएका छन्। उनले चीनसँगको सन्धी पुनरावलोकन गरी सम्बन्धलार्इ नयाँ अायाम दिन समेत सुझाब दिए।
यस्तो छ डा. भट्टरार्इले प्रधानमन्त्री अोलीलार्इ दिएको १० बुँदे सुझाबः
← चीन जान लागेका प्रधानमन्त्रीलार्इ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सुझाबः चिनियाँ लगानी भित्राउन प्रयास थाल्नुस
चितवनको कालिकामा कालोपत्रे बाटो उद्घाटन →